Tranon’ny profesora Zafy Albert : Namidin’ny HAT 5 000 fmg/m2 -
AccueilRaharaham-pirenenaTranon’ny profesora Zafy Albert : Namidin’ny HAT 5 000 fmg/m2
28/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Voaporofo izao fa tena famitaham-bahoaka fotsiny ny filazana fa tsy te hifanatri-tava amin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina no antony tsy nandehanan-dRajoelina nanatrika ny fandevenana ny filoha teo aloha, Zafy Albert.
Hay namidin’ny fitondran-dRajoelina 5 000 fmg/m2 tamin’izany orinasa Madaterrain 0321 izany ny trano fonenan’ny profesora, mitondra ny anarana “Saint Antoine IV”, mirefy 01Ha 18A 35Ca, TN 16.684-A Amboniloha Antananarivo. 11 835 000 Ar monja no namarotana io tanàna goavana be nisy ny trano nipetrahan’ny filoha teo aloha io, araka ny taratasy famarotana natao ny faha-24 Janoary 2014, izany hoe, iray andro nialohan’ny nandraisan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fitantanana ny firenena. Efa voaloa teny anivon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany ny vola mitentina 591 750 Ar saran’ny antontan-taratasy sy ny famindrana ny anaran’ny tompon’ny tany.
Azo antoka fa mbola maro ireo fananam-panjakana namidin’ny HAT ankoatra ity trano fonenan’ny profesora Zafy Albert ity. Ny “villa Pradon” lasan’i Mamy Ravatomanga, ny “villa Elisabeth” lasan’ny orinasa Madaterrain, sns. Ny minisitra Reboza Julien no natao sorona nanao sonia ny taratasy famarotana, fa baiko avy tamin’ny filohan’ny HAT, Andry Rajoelina avokoa izany rehetra izany, tahaka ny famarotana ny fiaramanidina Air Force One II.